Horumarinta Barnaamijka: Dib-u-eegis taariikhi ah illaa maanta | Laga soo bilaabo Linux
Horumarinta Barnaamijka: Dib-u-eegis taariikhi ah illaa maanta
Linux Post Ku Rakib | | Aplicaciones, dhowr
Horumarinta softiweerka (DS) wuxuu lahaa astaamo lagu garto bilowga ilaa maanta. Bilowgii Dunida Horumarinta Software-ka waxaa loo qaybiyey 2: Horumarinta Software-ka Bilaashka ah iyo Furfuran iyo Soo-saarista Barnaamijyada Ilaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa xiran.
Oo intaas oo dhammu waxay markooda bilaabeen tartan si ay u soo saaraan noocyo la mid ah Software-ka noocyo kala duwan oo codsiyo ah oo ku jira DS World kasta. Sidaas ayuu DS u banneeyay Software-kii ugu horreeyay iyo kan hadda jira (SS), ka dibna Barnaamijka Barnaamijyada (SP) ee Barnaamijka Codsiga (SA). Tan labaadna, laga bilaabo codsiyada dhaqan ahaaneed ee asalka ah, taas oo ah, lagu rakibi karo oo u gaar ah Nidaam kasta oo Hawlgal (OS) ilaa Codsiyada la qaybiyey ee cusub ee ka socda Internetka ee Blockchain.
Ficil ahaan isla wakhtigaas SS dhashey, kuwaas oo asal ahaan ahaa OS laftiisa, oo ay kujiraan darawalada qalabka (darawalada), yutiilitiyada yutiilitida iyo dhamaan aaladaha loo adeegsaday xakamaynta gaarka ah astaamaha kumbuyuutarka, taas oo ah, dhamaan barnaamijyadaas fududeeyay maaraynta walxaha Hardware (HW), sida sida: xusuusta, saxannada, dekedaha, aaladaha iyo dhinacyada, SP iyo SA ayaa iyaguna dhashay.
SPs waxaa kujiray badeecadaha SW ee ay u adeegsadeen barnaamijyayaashu inay ku horumariyaan barnaamijyada kale ee kombiyuutarka iyagoo adeegsanaya luqado kala duwan iyo / ama keyd. SPs guud ahaan waxaa kujira waxa loogu yeero tifaftireyaasha qoraalka, iskuduwayaasha, turjubaano, khadadka, iyo khaladaadka. Marka lagu daro Deegaannada Horumarinta Isdhexgalka ee Caan ka ah (IDE), taas oo ah, SW in koox isku deegaan ah (guud ahaan garaaf ahaan: GUI), dhammaan aaladaha lagama maarmaanka u ah, horay loogu soo sheegay, si loo daboolo wareegga horumarka ee barnaamijka oo dhan.
SA-na waxay ururiyeen SW oo ay adeegsadeen (dhamaadka) adeegsadayaashu inay fuliyaan hawl. SAs guud ahaan waxaa ka mid ah otomatiga xafiiska, naqshadeynta garaafka ama multimedia, xisaabaadka ama maamulka SWs, si loogu magacaabo qayb yar oo ka mid ah dhammaan qaybaha codsiyada ee aan ka heli karno qaybtaan. Sidaa darteed, SA ama si fudud dalabku wuxuu ku saabsan yahay
Barnaamij kasta oo u oggolaanaya adeegsadaha ugu dambeeya inuu ku qabto hawlo kala duwan kombiyuutar, laptop, kiniin, taleefanka gacanta ama noocyada kale ee qalabka ama aaladaha teknolojiyada.
Codsiyada (Barnaamijyada) bilawgii da'da kumbuyuutarka waxay lahaayeen dabeecad aasaasi ah oo loo baahan yahay in lagu rakibo in la isticmaalo, oo kaliya hal ama gaar ah, Native OS. Laakiin waqtiga iyo horumarka sayniska kombiyuutarka iyo teknolojiyadda, barnaamijyadu waxay beddelayeen helitaanka iyo gudbinta astaamaha sida: qaadista, isku-dhufashada badan, qaab-dhismeedka iyo is-beddelka. Oo sidaas, maanta waxaan haynaa noocyo badan oo Barnaamijyo ah, oo ka bilaabmaya dhaqan dhaqameed illaa cusub oo la qaybiyay.
Codsiyada asaliga ah, kuwa si gaar ah loogu sameeyay OS-ga qaaska ah, guud ahaan iyadoo la adeegsanayo Qalabka horumarinta Software-ka (SDK), iyagu waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee la abuuro. Astaamaha aasaasiga ah ee barnaamijyadan ayaa ah inay la jaan qaadayaan 100% shaqooyinka iyo astaamaha qalabka, aaladda ama barxadda, sidaasna ku helaya khibrad adeegsade wanaagsan. Sidaa darteed, waxay u muuqdaan inay si fiican u eegaan oo ay u shaqeeyaan si ka wanaagsan jawigooda hooyo, iyo sidoo kale inay socodsiiyaan dheecaan badan oo deggan. In kasta oo ay badanaa leeyihiin kharash horumarineed oo sarreeya, haddii ay tahay inaad u abuurto mid nooc kasta oo ah Native OS.
Hore u soco, Codsiyada Websaydhka ayaa soo baxay, tSidoo kale loo yaqaan 'WebApp', kuwaas oo ah kuwa ku dhex jira bog ama degel dhex mara bog internet. Sidaa darteed, waxaa lagu fuliyaa ficil ahaan biraawsar kasta oo internetka ah iyo nooc kasta oo qalab, qalab ama madal ah. Iyo ficil ahaan wax la mid ah oo iyaga lagu samayn karo qaab websaydh ah ayaa lagu samayn karaa qaabkooda dalabkooda lagu rakibin karo.
Codsiyada isku dhafan ayaa ka soo baxay midowgii 2-dii hore, kuwaas oo ah barnaamijyadaas oo lagu soo saaray luqadaha WebApps-ka oo u oggolaanaya in lagu isticmaalo barnaamijyo kala duwan, laakiin leh awoodda Abka Native si ay u helaan qayb weyn oo ka mid ah astaamaha HW ee qalabka, aaladda ama barxadda halka lagu fuliyo. Taasi waa, waxay si buuxda uga faa'iideystaan ​​kala duwanaanta horumarka websaydhka iyo awoodda ay ula qabsan karaan HW sida Barnaamijyada Dhaladka ah.
Maalmahan, Codsiyada Websaydha ee Horusocodka ayaa la soo saaray, sidoo kale loo yaqaan 'Progressive Web Apps' (PWA), oo asal ahaan ah bogag internet oo adeegsada "Shaqaalaha Adeegga" iyo tikniyoolajiyadaha kale, oo u dhaqmaan si ka sii badan sidii Barnaamijyada Dhaladka ah iyo in ka yar WebApps. Sidan oo kale, inta "Shaqaalaha Adeegga" iyo teknoolojiyada kale ay gadaal ka socdaan, dalabku wuxuu ku dhex shaqeeyaa shabakadda shabakadda.
Isla mar ahaantaana, ugu dambayntiina, Barnaamijyada hadda socdaa ay u haajireen qaabka Codsiyada loo Qaybiyey, oo sidoo kale loo yaqaan 'Decentralized Applications (Dapps),' kuwaas oo ah Barnaamijyo baahsan oo adeegsada aaladda '' Blockchain ''. si markaa adeegsadayaashu ay si toos ah isugula xiriiraan oo ay u fuliyaan hawlgallo (heshiisyo) iyada oo aan la dhexdhexaadin hay'ad dhexe oo maamusha adeegga. Sidaa awgeed, DApp kasta oo adeegsadayaasheeda ah waa noodh shabakad baahsan oo ay dhammaantood u wada dhaqmaan sidii inay ahaayeen nootaayo caalami ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo lagu sameeyo barxadda ay ku shaqeyso.
Adduunyada Horumarinta Software-ka ee lagu dhex milmay wadnaha Sayniska iyo Teknolojiyada ma joojiso horumarka iyo horumarka. Oo kanu waa sida software-ka la rakibayo (Native App) ay ugu oggolaadeen noocyo kale oo badan oo codsiyo ah (Web, Hybrid, Progressive, Distribrated).
Foomamka sida ugu dhakhsaha badan u baneyn doona qaabab cusub oo casri ah oo ah Barnaamijyada, kuwaas oo saameyn ku yeelan doona adeegsiga tikniyoolajiyadda hadda jirta iyo tan is beddeleysa., sida Xogta Weyn, Barashada Qotada dheer, Sirdoonka Cilmiga ah, iyo teknolojiyadaha waligood isbadalaya sida Cloud Computing iyo Blockchain.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Horumarinta Barnaamijka: Dib-u-eegis taariikhi ah illaa maanta
Sida aad ku muujisay maqaalkaaga, softiweer bilaash ah had iyo jeer waa la joogaa oo wuxuu lahaa oo hayey "xifaaltan" ka socda softiweerrada la xiray. Dariiqii aan usoconay awgood (marka laga reebo isbadalada lama filaanka ah) softiweer bilaash ah (ama si cad oo hufan ama daaha gadaashiisa ah) waa uuna ahaan doonaa boqorka. Doodayduna waxay ku saleysan tahay kuna adkeysaneysaa waxaad ka faallooto, awoodaha qaabeynta iyo isku xirka shabakadu aad ayey ufudud u tahay laqabsashada xaalado badan oo kaladuwan haddii ilaha uu furan yahay (taasi waa sababta Microsoft ay ugu guureyso bog furaheeda mashruuc furan sida Chromium ama adeegsata Azure oo ka soo jeeda mashruuc u furan server-keeda maxaa yeelay isdhexgalka ayaa aad uga waxtar badan isha furan).
Mawduuca sugaya, desktop-ka nolosha oo dhan (oo noqonaya mid sii yaraanaya muhiimad gaar ahaaneed awgeed), taas oo GNU / Linux - marka laga reebo dhif iyo naadir - loo yareeyo jimicsi uun isticmaalaha. Waa wax murugo leh maxaa yeelay waa inay jiraan ikhtiyaarro badan laakiin haddii aad awooddo, waad awoodaa. Kaliya waa inaad iskudaydaa.
Waad ku mahadsan tahay LPI inaad samaysay tiirarkan IT-ga wax yar oo muuqda.
Akhriso oo faallo ka bixi kombuyuutarka gacanta ku haya Linux Mint.
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga weyn… Salaan, Arazal!
ONLYOFFICE waxay ku daraysaa taageerada dukumiintiga dhammaadka-dhamaadka dukumintiga
Dungeons 3: ciyaar fiidiyoow oo weyn oo loogu talagalay Linux